घर अफ्रिकी फुटबल स्टोरीहरू सेनेगालिस फुटबल खेलाडीहरू एडुअर्ड मेन्डी बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो एडुअर्ड मेन्डीको जीवनीले तपाईंलाई उसको बाल्यावस्थाको कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, प्रेम जीवन (प्रेमिका / पत्नी), नेट वर्थ र जीवनशैलीको बारेमा तथ्यहरू बताउँछ।
सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, यो लेख पूर्ण रूपमा गोलकीपरको बायो हो, जुन उनी शुरुको दिनदेखि सुरु भयो जब उनी लोकप्रिय भए।
एडुअर्ड मेन्डी लाइफ स्टोरी। छवि क्रेडिट- इन्स्टाग्राम।
हो, तपाईं र मैले थाहा पाउनु भयो कि भिडियोहरू जरिवाना क्षेत्र भित्र उसको कमाण्डिंग उपस्थिति प्रदर्शन गर्दैछन्। यद्यपि धेरैले खास गरी चेल्सी फ्यानहरूले उनको प्रेरणादायक जीवनी पढेका छैनन वा एडुअर्ड मेन्डीसँग सम्बन्धित तथ्य पनि थाहा छ फेरल्याण्ड मिन्डी। अब धेरै विज्ञापन बिना, हामी सुरुको बर्षको कथा संग शुरू गरौं।
एडुअर्ड मेन्डी बाल्यकाल कहानी:
जीवनी सुरु गर्नेहरूको लागि, गोलकीपरसँग "टाढा ढोकाकी" उपनाम छ। एडुअर्ड मेन्डीको जन्म मार्च १ 1 1992 २ मा उनको आमा (सेनेगलबाट) र स्वर्गीय पिता (गुयना-बिसाउबाट), मोन्टिभिलियर्स, उत्तरी फ्रान्सको फ्रान्सेली नगरपालिकामा भएको थियो।
एडुअर्ड मेन्डी बढ्दो-अप वर्ष:
Foot फिट inches इन्च गोलकीपरले आफ्नो शुरुआती वर्षहरू फ्रान्समा आफ्ना दाइ-दिदीबहिनीसँग बिताए जसमा एक बहिनी पनि छन्। बिर्सनु हुँदैन, एडुअर्ड मेन्डीको चचेरो भाई हो फेरल्याण्ड मिन्डी- जसलाई उहाँ पनि हुर्कनुभयो। आजको दिनसम्म, उनको अनुहारबाट मुस्कुराउँदछ जब उहाँ आफ्नो रमाइलोले भरिएको बढ्दो उमेरहरू सम्झनुहुन्छ - गैर-फ्रान्सेली मूल अभिभावकको छोराको रूपमा - जो एक बच्चाको रूपमा खेलको उत्कट प्रेमी बन्नुभयो।
एडुअर्ड मेन्डी परिवार पृष्ठभूमि:
आप्रवासी आमा बुबाको छोराको रूपमा पनि, गोलकीपरको बायोमा पूर्ण गरीबीको कुनै अध्याय छैन। यसले यो दर्शाउँछ कि ऊ गरीब घरबाट आएको होइन, तर मध्यमवर्गीय परिवारबाट आएको हो। वास्तवमा, एडुअर्ड मेन्डीका अभिभावकहरूले अभाव बिना उनलाई हुर्काउन उत्कृष्ट काम गरे। त्यसकारण, उहाँ सँधै तयार हुनुहुन्थ्यो उहाँ आफैले रोज्नु भएको जुन बाटोमा हिंड्न मद्दत गर्नुहोस्।
एडुअर्ड मेन्डी परिवार उत्पत्ति:
जे होस्, तपाईं शट-स्टापरलाई फ्रान्सेली र सेनेगाली राष्ट्रीयको रूपमा चिन्नुहुन्छ। सत्य यो हो कि उहाँसँग पनि परिवारको उत्पत्ति जडित छ जुन गिनिया-बिसाउमा छ जहाँ उसका बुवाहरू हुन्। त्यस्तै, ऊ शीर्ष-उडान फुटबलमा केही अफ्रिकी बहु-जातीय व्यक्तित्वहरू मध्ये एक हो।
कसरी क्यारियर फुटबल एडवर्ड म्यान्डीको लागि सुरु भयो:
एउटा सानो बालकको रूपमा, ऊ गहिरो प्रेम फुटबलमा अरू कुनै पनि कुरा भन्दा ठूलो भयो। अझ, उहाँ खेलमा एक पेशेवर हुन चाहने सपनाको साथ थिए। प्रारम्भमा, एडुअर्ड मेन्डी अभिभावकहरूले उनीलाई H बर्षको उमेरमा ले हभरे कक्र्याकुभिल फुटबल क्लबमा भर्ना गरेर उनको सपनाहरू पूरा गर्न सहयोग पुर्‍याए।
क्लबमा खेलकुदमा आफ्नो पहिलो कदमहरू चाल्दा, एडुअर्डसँग धेरै फुटबल मूर्तिहरू थिए जसलाई उनले सामेल गर्न खोजे फेबियन बार्थेज। उनी ले हभ्रे एथलेटिक क्लबमा सामेल हुन गए जहाँ उनले गोलकिपिंग आधारभूत कुराहरूमा आफ्नो प्रभुत्वलाई पूर्णता दिए।
धेरै राम्रो भए पनि, एडुअर्ड ले हभ्रे एथलेटिक क्लब पहिलो छनोट गोल कीपर थिएनन्। उनी अधिक प्रतिभाशाली झाखरी बाउचरको पछाडि अडिएका थिए जुन विकासले उसलाई सीएस म्युनिसिपेक्समा खेल्ने स्तर खसाल्यो।
प्रारम्भिक क्यारियर निराशा र फुटबल फुट
गोलकीपिंग प्रोडिजीले अन्ततः एएस चेर्बर्गसँग आफ्नो व्यवसायिक क्यारियर सुरु गर्‍यो जहाँ उनले पर्याप्त प्लेटाइम पाएनन्। २०१ou मा एएसवर्डको एएस चेर्बर्गको सम्झौता समाप्त भएपछि उनीसँग अन्य क्लबमा सम्मिलित हुने प्रस्ताव थियो तर उसले फ्रान्स बाहिरको लिगमा खेल्ने अवसर पायो।
त्यस बेला, उसको पूर्व एजेन्टले उसलाई आश्वासन दिएका थिए कि उनीहरूले सम्झौता सील गर्नेछन्। दुर्भाग्यवस, यसले काम गरेन र २२ वर्ष पुरानो बेरोजगार छोडियो।
मैले उसलाई सम्पर्क गर्ने कोशिश गरें (पूर्व एजेन्ट) तर उनले कहिले प्रतिक्रिया दिएनन्। मैले उहाँबाट भविष्यको शुभकामनाको लागि पाठ बाहेक अरू केही सुनेन।
एडुअर्डले बोच सम्झौताको LeParisen लाई भने। क्लब-कम गोलिले आफूलाई उत्तरी फ्रान्समा रोजगार शिकारीहरूको कतारमा सामेल भएको देखे। फुटबलबाट पूरै वर्ष बितिसकेपछि, गरीब एडुअर्डले खेल छोड्ने निर्णय गरे।
फुटबलर वा अरू कसैको लागि बेरोजगार हुनु अनुहारमा थप्पड प्राप्त गर्न मिल्दोजुल्दो छ।
असफलताको स्ट्रिंगले मार्क छोड्छ जसले तपाईंलाई फुटबलको साथ जारी राख्नुपर्दछ कि हुँदैन भन्नेमा शंका उत्पन्न गराउँछ।
एडुअर्डले फेरि सोफुट पत्रिकामा भने।
एडुअर्ड मेन्डी बायो- फेम टु फेम कहानी:
लिभरपूल भनाइ जस्तै, सेनेगाली गोलकीपरले आफूलाई एक्लै हिड्दै गरेको देखेनन्। अपेक्षित रूपमा, एडुअर्ड मेन्डीका अभिभावक र परिवारका सदस्यहरू उनलाई सान्त्वना दिन आएका थिए, किनकि उनीहरूले सल्लाह दिए कि उनले खेललाई अर्को मौका दिए जुन उसले गरे।
धन्यबाद, त्यति कम आत्मविश्वास र असुरक्षित गोलकीपर ले हभरेमा फर्किए जहाँ फुटबॉलले उसको लागि तलब वा ज्याला बिना सुरु गर्यो। हो तपाईंले सहि पाउनुभयो!… उनले निरन्तर एक बर्ष तलबको साथ क्लबसँग प्रशिक्षण दिए।
एक दिन, एडुअर्डले चाँडै सूचनाहरू पाए कि मार्सिले गोलकीपरको खोजी गर्दै थिए - ब्रिस साम्बा र जूलियन फेब्री जो onणमा थिए। क्लबको परीक्षण लागू गर्दै र पारित गर्दै, उहाँ तिनीहरूको चौथो-विकल्प गोलकीपर बन्नुभयो।
जे होस् फास्ट राइजिंग सेनेगलिस अझ प्रतिभाशाली फ्लोरियन एस्केल्सको पछाडि थिए जो पहिलो छनौट शट-स्टपर थिए। यद्यपि, उनले सीमितता बाहिर धकेल्दै रहेछन् - एक उपलब्धि जसले उनलाई कुनै समय बिना नै उच्च उचाइ प्राप्त गर्न मद्दत गर्‍यो।
एडुअर्ड मेन्डी बायोग्राफी - फेम टू फेम स्टोरी:
मैले मार्सेलीमा बस्दा पेशेवरहरूसँग प्रशिक्षण पाएँ। यो त्यस्तो चीज हो जुन केवल एक होइन: g गोलकीपरको रूपमा सपना देख्न सकिन्छ।
जस्तै ताराहरू संग प्रशिक्षण अबू डायाबी, लसाना डायआरा र बिरूद्ध दुई खेलको बिरूद्ध Michy Batshuayi वा स्टीभन फ्लेचरले वास्तवमै मबाट सबै भन्दा राम्रो ल्यायो।
एडुअर्ड मेन्डी- आफ्नो अनुभव मा भन्छन्। नियमित प्लेटाइम खोज्दै, फाइटर लिग २ आउटफिट रेम्समा सरे जहाँ उनले २०१ 2-२०१ season को मौसममा क्लबको पहिलो-छनौट कीपर बन्नको लागि काम गरे। उनले पछि क्लबलाई लिने १ मा रेन्नेस जानु अघि प्रमोशन प्राप्त गर्न मद्दत गरे।
रेन्स सफलता कहानी:
क्लबसँगै, एडुअर्ड वृद्धि सुपर द्रुत भयो, क्लबलाई तेस्रो स्थानमा पुर्याएर चैम्पियन्स लिगको लागि क्वालिफाई गर्न। उनले रनेस र चेल्सी क्लब लिजेन्ड सहित धेरैबाट धेरै प्रशंसा कमाए Petr Cech कसले ब्लूजलाई सल्लाह दियो फ्रैंक लम्पर्ड उहाँलाई हस्ताक्षर गर्न।
छिटो अगाडी आफ्नो जीवन कहानी लेख्न को समय को लागी, एडुअर्ड मेन्डी- लाई नील मापेय र लुकास डोगेज फ्रान्सेली मध्य तौल बीच हो जुन उनीहरूको प्रीमियर लिगमा व्यापार गर्दछ। उनी चेल्सी एफसीको साथ पहिलो छनौट गोलकीपर बन्न प्रार्थना गर्दछन्। अपेक्षित रूपमा, मेन्डी प्रतिस्पर्धा प्रदान गर्ने छ कि कि त त धक्का दिनेछ Kepa Arrizabalaga पछाडि उसको सर्वश्रेष्ठमा फिर्ता जानुहोस् वा नम्बर १ स्ट्यापरको रूपमा अनसाट गर्नुहोस्। जे पनि दिशा निर्देशनहरू उसको लागि जान्छ, बाँकी, जस्तो हामी सधै भन्छौं, इतिहास हुनेछ।
एडुअर्ड मेन्डीको प्रेमिका को हो?
उसको सफलताको साथ, र foot फिट inches इन्च वा १6cm सेन्टिमिटर अग्लो उचाइमा पनि सेनेगलका सुन्दर मानिससँग आफ्नो प्रेम जीवनमा उसको लागि काम गर्ने सम्भावना छ। यद्यपि (लेख्नको यस समयमा), एडुअर्डले अझै उनलाई सफल हुन महिला गएको बताउँदैन।
एडुअर्ड मेन्डी डेटि Who को हो? फोटो सुविधाहरू: LB र IG।
भाग्यवस, उनले भर्खरै प्रिमियर लिगमा खेल्न साइन अप गरे जहाँ प्रशंसकहरूले चाँडै नै उनको प्रेमिका छ वा यदि उनी विवाहित छन् भन्ने प्रश्नहरूको उत्तर दिन्छन् - जसमा उनीहरुका श्रीमती र बच्चाहरु छन्।
सत्य कुरा के हो भने, हामीलाई श doubt्का लाग्छ यदि उसको क्षमताको मानिस अविवाहित हुन्छ भने। त्यसकारण हामी तपाईलाई आश्वासन दिन्छौं, तपाई एडुअर्ड मेन्डीको प्रेमिका वा पत्नीलाई भेट्न धेरै समय लाग्नेछैन। उनको समय र लन्डनको सफलता बताउनेछ।
एडुअर्ड मेन्डी पारिवारिक जीवन:
शट-स्टपर एक हो जसले आफ्नो परिवारसँग सम्बन्धको मोल गर्दछ। सरल शब्दमा भन्नुपर्दा, उहाँ आफूसँग धेरै नजिकका मानिसहरूलाई माया गर्नुहुन्छ। यहाँ हामी तपाईंहरूलाई एडुअर्ड मेन्डीका आमा-बुबा र भाइबहिनीहरूको बारेमा तथ्यहरू दिन्छौं। साथै, हामी तपाईंलाई तिनका आफन्तहरूका बारे तथ्यहरू सहयोग गर्नेछौं ताकि तपाईं उसलाई अझ राम्ररी बुझ्न सक्नुहुनेछ।
एडुअर्ड मेन्डीको बुबाको बारेमा:
उनको मायालु स्मृतिमा, फ्रान्सेली व्यक्तिको बुबा (पा मेन्डी) अब छैन। उहाँ गम्भीर स्वास्थ्य समस्याको कारण मर्नुभयो। धन्यबाद, एडुअर्ड मेन्डीका बुबा उनका छोरालाई पेशेवर देख्नका लागि जीवित थिए। दुखद कुरा यो हो कि उनी लामो समयसम्म खेलमा एडुअर्डको सफल वर्षहरूको साक्षी दिन बाँच्न सकेनन्। आफ्नो बुवालाई तिर्ने एक तरिकाको रूपमा, गोलकीपर एक पटक आफ्नो बुबाको वंश (गिनी बिसाउ) को लागि खेल्न सहमत भए - केवल अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति।
एडुअर्ड मेन्डीकी आमाको बारेमा:
पहिलो र उनी, उनको सबैभन्दा ठूलो फ्यान मध्ये एक हो। एडुअर्ड अक्सर सोशल मीडियामा आफ्नी आमालाई यस्तो तरीकाले मनाउँदछन् कि उनीहरू बीचको केमिस्ट्रीको बारेमा कुनै श doubt्का छैन। हामीसँग उसको चित्रको तस्वीर तल छ। उसको बुबाआमा माझ, तपाई मसंग सहमत हुनुहुन्छ एडुअर्ड मेन्डी उसको बुवा जस्तो देखिनेछ - दुबै उचाई र रंगमा।
एडुअर्ड मेन्डीलाई उनको सहयोगी आमाको साथ हेर्नुहोस्। फोटो: इन्स्टाग्राम।
एडुअर्ड मेन्डी भाई बहनहरूको बारेमा:
गोलिज इन्स्टाग्राम पृष्ठमा फोटोहरूको नजिकको अध्ययनले तपाईंलाई विश्वस्त तुल्याउनेछ कि उहाँ आफ्ना बाबु-आमाको मात्र सन्तान हुनुहुन्न। एडुअर्ड मेन्डीका धेरै दाजुभाइ र दिदीबहिनी छन् जो उनी जस्ता धेरै अग्लो छन्। के तपाईं उसलाई तलको फोटोमा भेट्न सक्नुहुन्छ?
उनका बहिनीहरू र भाइहरूसँग Edouard Mendy को एक दुर्लभ तस्बिर। इन्स्टाग्रामद्वारा छवि।
एडुअर्ड मेन्डीका आफन्तहरूका बारे:
गोलकीको नजिकको परिवारबाट टाढा, तिनका हजुरबा हजुरआमा, काकी, काका, काका, भतिजा र भतिजीको कुनै रेकर्ड छैन। फेरी र चाखलाग्दो कुरा, एडुअर्ड मेन्डी काचेरी भाइ हुन् फेरल्याण्ड मिन्डी जो लेख्ने समयमा रियल म्याड्रिड र फ्रान्सको राष्ट्रिय टीमको लागि खेल्छन्।
एडुअर्ड मेन्डी व्यक्तिगत जीवन:
साथीहरू, फ्यानहरू र टीमका साथीहरूले फुटबल बाहिर गोलकीपरका पात्रहरूको सामग्रीको बारेमा केहि तथ्यहरूको प्रमाणिकरण गर्न सक्दछन्। तिनीहरूमा उसको डाउन-टू-पृथ्वी प्रकृति, खुलापन, आशावाद र अविश्वसनीय कार्य दर समावेश छ। ऊ साथीहरूसँग बस्न मन पराउछ र फेसनमा चासो राख्छ। यसका अतिरिक्त, चलचित्रहरू हेर्नु र भिडियो खेलहरू पनि पनि ऊ केहि गतिविधिहरू हुन् जुन उसले खेलको मैदानमा नभए पनि व्यस्त राख्छ।
एडुअर्ड मेन्डी जीवनशैली र नेट वर्थ:
२० discuss२ र उसको आयको स्रोतको शट-स्टपरको मूल्य कति छ भनेर छलफल गरौं। सुरु गर्न, २०२० मा एडुअर्ड मेन्डीको नेट वर्थ अझै पूनरावलोकनमा छ। कुनै श doubt्का बिना, ऊसँग एक द्रुत बृद्धि भएको धन छ एक ठूलो चेल्सी एफसी मजदूरीको लागि धन्यवाद।
"अग्लो ढोकावाहक" ले ब्राण्डको समर्थनका लागि महत्वपूर्ण आम्दानी पनि गर्दछ। यद्यपि उसको रूढीवादी जीवनशैलीले उसको खर्च बान्कीलाई ट्र्याक गर्न गाह्रो बनाउँछ। जे होस्, यो पक्का छ कि पोश कार चलाउन र महँगो घरहरुमा बस्ने क्षमता छ।
एडुअर्ड मेन्डी तथ्यहरू:
यो आकर्षक लेखमा बेर्नुहोस्, यहाँ स्टपरको बारेमा कम ज्ञात वा अनटल्ड तथ्यहरू छन्।
तथ्य # १- एडुअर्ड मेन्डी धर्म:
आफ्नो चचेरो भाई द्वारा निर्णायक- Ferland, यो विश्वास गर्न को लागी पक्ष मा उहाँ पर्नुहुन्छ विभाजन गर्न एकदम सजिलो छ। हाम्रो मतभेद इस्लाम उसको बुबाको धर्म हो किनभने एक मुस्लिम हुनु को ठूलो पक्ष मा छन्।
तथ्य #2- फिफा श्रेणीकरण:
गोलकीको कुल फिफा २०२० रेटिंग 2020१ अ of्कको सम्भावनाको साथ 78 81 अ is्क मात्र हो। ऊ बराबरी हुन योग्य छ Kepa Arrizabalaga who 83 को सम्भावितताको साथ who 87 को समग्र केसँग छ? छैन?
ऊ पक्कै पनि अझ बढी हकदार छ? छवि: SoFIFA।
तथ्य #3- व्यवसाय Acumen:
यदि पेशेवर गोलकीपिंगले कहिल्यै एडुअर्डको लागि काम गरेन भने ऊ व्यापारको लागि व्यवस्थित हुनेछ। ऊ त्यस्तो व्यक्ति हो जससँग उत्कृष्ट पारस्परिक कौशल हुन्छ र त्यो पक्षमा निश्चय पनि राम्रो प्रदर्शन गर्न सक्छ।
ओडोक ओन्डे मेन्डी
निकनाम अग्लो ढोका
जन्म मिति मार्च १ 1 1992 को २१ औं दिन
जन्मस्थान मोन्टिभिलियर्स, फ्रान्स
खेल्ने स्थिति गोलकीपिंग
एडुअर्ड मेन्डीका अभिभावकको नाम N /
एडुअर्ड मेन्डीका भाई-बहिनीहरूको नाम N /
नेट मूल्य समीक्षा अन्तर्गत।
सोख साथीहरूसँग ह्या hanging्गआउट गर्दै, चलचित्रहरू हेर्दै र भिडियो गेमहरू खेल्दै।
उचाइ Fe फीट, inches इन्च
NationalityÉdouard Osoque Mendy फ्रेन्च र सेन्गालिस
हाम्रो एडुअर्ड मेन्डीको जीवनीको सारांश पढ्नको लागि धन्यबाद। हामी आशा गर्दछौं कि यसले तपाईलाई विश्वास गर्न प्रेरित गर्दछ कि हार मान्नु कहिल्यै अस्वीकृत हुँदैन। कुनै श .्का बिना, आफ्नो बायो एक कहानी बताउँछ - निराशा देखि आफ्नो चरणहरु लाई पछाडि को लागी जहाँ उनले एक जीवन परिवर्तन अवसर को लागी आफूलाई राखे। एडुअर्ड मेन्डी अभिभावकहरू, विशेष गरी उनका स्वर्गीय बुबाले आफ्नो धैर्यता र लगनशीलताका बारे गर्व गर्नुपर्दछ।
Lifebogger मा, स्थिरता र निष्पक्षता तथ्यगत फुटबल कथाहरू प्रदान गर्नका लागि हाम्रा वाचवर्डहरू हुन्। हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् वा टिप्पणी दिनुहोस् यदि तपाईं केहि देख्नुहुन्छ जुन यस लेखमा सही देखिँदैन। वा अन्यथा, कृपया तपाइँको गोलकीपरको सम्झनाको बारेमा तपाइँ के सोच्नुहुन्छ हामीलाई बताउनुहोस्।